Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya oo Billaabatay
Magaalada Muqdisho waxaa goor dhow ka bilaabatay doorashada Madaxweynaha Somalia oo 329-ka xildhibaan ee labada Aqal ee Baarlamanka ay ku dooranayaan Madaxweyne.
Kullankan doorashada ayaa waxaa furay Gudoomiyaha Baarlamanka Maxamed Cusmaan Jawaari, waxaana ku xigsaday oo hadal wacdi ah u jeediyay mudanayaasha wax dooranaya iyo murashixiinta, gudoomiyaha dalaladda culumada Soomaaliyeed, Sheekh Bashiir Axmed Salaad.
Sheekh Bashiir ayaa uga digay mudanayaasha laaluush qaadasho inay codadkooda iibsadaan iyo inay fulin waayaan mas’uuliyaddii ay u dhaarteen.
21 murashax ayaa u taagan doorashadan, waxaana ku jira madaxweynaha difaacanaya xilka Xassan Sheekh Maxamud,Madaxweynihii isaga ka horeeyay Sharif Sheekh Axmed iyo labadoodii Ra’isul wasaare, Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo Cumar Cabdirashid.
Waxaa ka hor doorashada maanta tanaasulay Zakariye Xaaji Maxamuud Cabdi.
Doorashada ayaa ka dhaceysa hool ku dhex yaala Garoonka Diyaaradaha ee Muqdisho kuna dhow qeybta garoonkii ciidamada cirka Soomaaliya ee Afisyooni.
Xarunta ay doorashadu ka dhaceyso ayaa waxaa ku suggan korjoogayaal caalami ah iyo wariyeyaal inkastoo la xadiday xiriirka ay dadka gudaha ku jiraa ay la sameyn karaan banaanka xarunta maadaama taleefanada la mamnuucay.
Wariyeyaasha tabinaya doorashada ayaa fursado loo siiyay in mararka qaar ay isticmaali karaan taleefanada.
Malaayiin Somali ahna waxey kala socdaan shaashadaha telefishnada maxaliga ah iyo qaar ka mid ah warbaahinta oo tebin toos ah dhinaca baraha bulshada ka sameynaya.
Doorashada ayaa dhaceysa xilli guud ahaan ammaanka Muqdisho la adkeeyay oo wadoyinka, goobaha ganacsiga iyo iskuuladu ay xiran yihiin.